မင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ထင်နေသူတွေအတွက် ရင်ထဲကခံစားချက်အမှန်တွေကို ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ သုသု - Cele Gabar
By RainowPosted on September 10, 2020 September 10, 2020
နာမညကွှီးမိတကွပပွညာရှငတွဈယောကဖွှဈတဲ့သုသုကတော့ သရုပဆွောငတွဈယောကမွဟုတစွဉအွခှိနကွတညွးက ဟာသTik Tok ဗှီဒီယိုတှနေဲ့ ပရိသတအွားပေးခစှခွငမွှုရရှိခဲ့သူပါ။ နောကပွိုငွးမှာတော့ ရုပရွှငဇွာတကွားကှီးတှမှောပါ ပါဝငသွရုပဆွောငလွာရတဲ့အထိ အောငမွှငမွှုရရှိလာသလို ကှောငွှာဗှီဒီယိုအတိုလေးတှလညွေး ဆကတွိုကရွိုကကွူးလာရသူပါ။
သုသုကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ကို မငွးသမီးဖှဈခငှနွတယလွေို့ ထငနွသေူတခှို့ကို ဖှရှငွေးစကားပှောခဲ့ပါတယွ။ ” ကမှက မငွးသမီးမဖှဈခငှပွါဘူး ရူးလညွးမရူးရဲပါဘူး ကမှရုပနွဲ့…. သရုပဆွောငဖွှဈခငှတွာပါ။ သရုပဆွောငတွောငမွှ ဟာသ သရုပဆွောငပွဲဖှဈခငှပွါတယွ။ ကိုယွ့ကှောငွ့သူမှားပှောရွှှငသွှားတာ ရယမွောသှားတယဆွိုရငွ ကမှ အရမွးပှောပွါတယိ… လူတယောကကွို ငိုအောငလွုပရွတာလှယပွါတယြ။ တကယမွရယရွဘဲ ရယအွောငလွုပရွတာ တကယခွကခွဲပါတယွ။ အဲ့တာ အနုပညာပါပဲ ကမှ ဆကကွှိုးစားနမှောပါ ဟာသ သရုပဆွောငဖွှဈဖို့” ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ရေးသားမှှဝလောပါတယွ။
သုသုကတော့ ဒီလိုအခှအနရေေောကဖွို့ ဘဝကိုခကခွကခွဲခဲရုနွးကနကွှိုးစားလာရသူဖှဈပမယွေ့ အကောငွးမှငစွိတရွှိသူတဈယောကပွါ။ ဝဖနမွှေုတှဘယလွေောကပွဲရှိရှိ လူတိုငွးကိုပှောစွလေိုတဲ့စိတနွဲ့ ဗှီဒီယိုလေးတှမှော ဟာသဖောကကွာသရုပဆွောငလွေ့ရှိသူဖှဈပှီး။ သူ့ရဲ့ရညမွှနွးခကှကွလညွး မငွးသမီးတဈယောကဖွှဈဖို့ထကွ ဟာသသရုပဆွောငတွဈယောကသွာ ဖှဈခငှတွာပါတဲ့ ပရိသတကွှီးရေ..
Source – Nyi Nyi Maung ,Rainbow- Cele Gabar
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Nyi Nyi Maung, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, သုသု
Previous post ဟိုတယ်မှာ Qဝင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ Lock Down ချတဲ့အကြောင်းကို အခွီရိုက်ကူးထားတဲ့ ကိုပေါက်
Next post မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် မြောက်ဥက္ကလာဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ နေ့လည်စာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့မိခင်